5-ta barnaamij ee asturnaanta ee ugu wanaagsan Android | Androidsis
Android waa nidaam qalliin oo loogu talagalay taleefannada casriga ah oo u muuqda mid bixiya ikhtiyaarro badan oo qarsoodi ah iyo nabadgelyo. Tan waa in lagu daraa waxa soo-saarayaasha moobiilku ku daraan lakabyadooda u gaar ahaaneed, sida Samsung ay ku sameyso galka aaminka ah, tusaale ahaan, codsi aad ku keydin karto oo ku qarin karto faylasha, sawirrada, fiidiyowyada iyo inbadan oo ah hab aamin ah oo qarsoodi ah sidaa darteed in qofna, adiga mooyee, uusan marin u lahayn iyaga.
Sidoo kale. Dukaanka Google Play waxaa ka buuxa codsiyo badan oo diirada lagu saaray asturnaanta taleefannada gacanta iyo, sidaa darteed, dadka isticmaala, isku-dubbaridkan waxaad ka heli doontaa dhowr ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa 5-ta barnaamij ee qarsoodiga ah ee ugu fiican Android.
Kahor intaadan u tagin, waxaa xusid mudan in dhammaan codsiyada aad ka heli doonto hoosta ay gebi ahaanba bilaash yihiin. Qaarkood ayaa laga yaabaa inay bixiyaan noocyo lacag bixin ah oo iyaga laftooda ah ama astaamo horumarsan oo heer sare ah oo u baahan lacag-bixinno gudaha ah. Si kastaba ha noqotee, qasab maaha in la bixiyo wax lacag ah oo lacag ah oo loogu talagalay isticmaalka kuwan.
1 AppLock - Qufulka App
2 Qalabka qufulka
3 Qari faylasha iyo sawirrada gaarka loo leeyahay - PRIVARY
4 Xisaabiyaha - Sawirka Sawirka qari sawirada iyo fiidiyowyada
5 Sirta Xogta DuckDuckGo
AppLock - Qufulka App
Waxaan ku bilaabaynaa isku-ururinta mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan qaybteeda. Qufulka App ama AppLock, sida kooban oo si cad loogu sharraxay magaciisa, waa asturnaanta iyo aaladda amniga ee loo isticmaalo in lagu xannibo gelitaanka codsiyada. Kaliya waxaad ku geli kartaa kuwan lambar sir ah oo lagu adeegsan karo qaab. Intaas waxaa sii dheer, shaashadda furitaanka si buuxda ayaa loo habeyn karaa, oo leh mowduucyo iyo qaabab badan oo ka dhigaya bilaabista barnaamij xoogaa indho-qabad leh.
Waxaa dhacda in marar badan asxaabta, qoyska iyo dadka yaqaan ay naga codsadaan inaan wacno ama u adeegsanno si ka duwan, tanna waa inaan siino taleefanka gacanta oo furan. Xaaladda noocan oo kale ah, qofku wuxuu siin karaa oo keliya adeegsiga uu isagu / iyadu filaysay, laakiin dadka kale qaarkood waxay u isticmaali karaan shaqooyin kale iyo barnaamijyo kale si aan taxaddar lahayn oo aan oggolaansho hore lahayn ama, wixii ka sii xumaan kara, dib u eeg sawiradeenna iyo sawirradeenna goobta. iyo fariimaha gaarka ah ee barnaamijyada baraha bulshada. Taasi waa sababta aan u dareemi karno xoogaa raaxo la'aan, cabsi iyo / ama walwal markii aan amaahinayno mobilka, iyo sabab wanaagsan, tan iyo Waxaa jira waxyaabo badan oo gaar loo leeyahay oo, sababo jira awgood ama mid kale, aynaan rabin in lala wadaago, aad ayey u yar tahay in qof arko ogolaansho la'aan.
Si looga fogaado waxa noocaan ah, AppLock wuxuu halkan u joogaa inuu u adeego. Codsigan, sidaan horeyba u sheegnay, waad xaddidi kartaa gelitaanka qof kasta oo aadan rabin inuu arko waxyaabahaaga qaaliga ah, ilaa aad siiso lambarka sirta ah ama qofkaas uu si uun u ogaado. Waad joojin kartaa barnaamijyada sida Gmail, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ciyaaraha sida Fire Free, Call of Duty Mobile, PUBG iyo ficil ahaan barnaamijyo kale, oo ay ku jiraan kuwa nidaamka iyo kuwa horay loo rakibay. Sidoo kale, waxaad astaysto qaabka qufulka inuu noqdo mid aan muuqan oo raad kama tagi karo inta aad fartaada ku dhajineyso shaashadda.
Shaqada kale ee wanaagsan ee qalabkani waa qari faylasha sida sawirrada iyo fiidiyowyada, sidaa darteed adiga kaliya waxaad marin uga heli kartaa kuwan iyada oo loo marayo qasnadda, taas oo ku dhex jirta barnaamijka. Tan waxaad ku sameyn kartaa sawirrada iyo fiidiyowyada inay ka baaba'aan shaashadda taleefanka.
Waqti kasta waxaad ku furan kartaa barnaamijyada AppLock, si aadan ugu qasbanayn inaad gasho qaab furitaan mar kasta oo aad rabto inaad furto.
Developer: Kooxda Xirfadda ToH
Maaddaama codsiyada xannibista ay yihiin kuwa ugu caansan qaybta asturnaanta iyo amniga, waxaan kula soo laabaneynaa mid kale, in kasta oo aysan u taagnayn haysashada magaca asalka ah ee dhammaantood, laakiin magac guud, mid fudud oo toosan, waxay u sameysaa sababtoo ah shaqooyinkeeda iyo wanaaga ay leedahay inay bixiso.
Waana in barnaamijkani u shaqeeyo si la mid ah kii hore loo sharraxay, sidaasna ku bixinaya xannibaadda marin u helka barnaamijyada horay loogu daray sanduuqa qufulka abka. Tan, waa inaad gashaa qaab, biin ama lambar sir ah si aad uhesho barnaamijka aad rabto xilligan. Waxyaabaha sidoo kale cajiibka ah ayaa ah in habka furitaanka lagu dari karo faraha, oo leh dareemayaal kala duwan oo lagu ogaanayo (kaliya haddii taleefanka uu haysto, dabcan).
Wax xiiso leh oo qalabkani sidoo kale soo bandhigo waa taas noocyo kala duwan oo mawduucyada qufulka ah iyo naqshadeynta ayaa lagu dabaqi karaa iyada, taas oo aad dooran karto oo aad beddeli karto wakhti kasta iyo inta jeer ee aad jeceshahay. Waxaad sidoo kale xayiran kartaa fariimaha iyo wicitaanada barnaamijkan, wax faa iido weyn u yeelan kara wax kabadan hal.
Sida ugu badan iyo ficil ahaan dhammaan barnaamijyada nooceeda ah, waxay u oggolaaneysaa xannibaadda barnaamijyada shabakadda bulshada iyo farriimaha degdegga ah sida Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, Line iyo inbadan. Waxa kale oo ay taageertaa xannibaadda codsiyada nidaamka sida kamaradda. Dhinaca kale, waa mid ka mid ah barnaamijyada quudiya wax yaroo RAM iyo batteriyaal ah, wax aad muhiim ugu ah kiisaskan is-maamul-wanaagga iyo waxqabadka mobilada tan iyo markii ay tahay aalad had iyo jeer ku shaqeysa asalka. Intaas waxaa sii dheer, waxay taageertaa dhowr luqadood, oo ay ku jiraan, sidee bay noqon kartaa haddii kale, Isbaanish iyo Ingiriisi.
Developer: Barnaamijyada Lucky Mobile
Qari faylasha iyo sawirrada gaarka loo leeyahay - PRIVARY
Tani waxay noqon kartaa barnaamijka ugufiican ee lagu qariyo faylka Android, illaa iyo hadda. Waana mid ka mid ah kuwa ugu kalsoonida badan, aamin ah ee wax ku oolka ah Faylasha "baabi'i" meelihii ay asal ahaan ka yimaadeen, si markaa adigu kaliya aad u heli karto oo aad u arki kartid markasta oo aad rabto.
Hawlgalkeedu waa mid fudud oo wax ku ool ah. Haddii aad rabto feyl sida sawir, muuqaal iyo dukumiinti (PDF, Word, Excel, iwm) oo aysan heli karin qof kasta oo taleefankaaga soo qaada, kaliya ku dar barnaamijka jirkiisa, isla markiiba ka dib iyo si toos ah, waxay noqon doonaan lagu duubay hab gebi ahaanba aamin ah si aad u daawato iyaga ka dhigi kartid wax alla wixii aad rabto wakhti kasta gudaheeda.
Si laguu siiyo fikrad dhab ah oo ku saabsan sida ay u shaqeyso, haddii, tusaale ahaan, aad qariso sawir, mar dambe kama soo muuqan doono qolka sawirka, taas oo ah halka ay dhammaan sawirradu sida caadiga ah ku yaalliin, laakiin waa QAADASHO, taas oo, ay habka, waxaad ku heli kartaa oo keliya adoo galaya lambar sir ah ama furid qaab ah. Halkan waxaa ku yaal amniga iyo asturnaanta qalabkan.
Dhammaan feylasha, sawirada iyo fiidiyowyada lagu daray laabta barnaamijka ayaa laga saarayaa fagaaraha dadweynaha kadibna waa la isweydiinayaa iyadoo la adeegsanayo nidaamka AES CTR, hab sir ah oo ballan qaadaya inuu bixinayo difaac aan nacas lahayn taas oo, sida uu sheegayo soo-saaraha, ay la mid tahay ta ay bangiyadu u adeegsadaan in ay ku hubiyaan nabadgelyada macaamiishooda, taasoo in badan sheegaysa.
Haddii ay dhacdo in wax kasta oo lagu sharaxay ay yaryihiin ama aysan adiga xiiso kuu lahayn, wax suuragal ah in dareenkaaga soo jiito waa shaqada FakeTresor. Tani waxay ka hortageysaa qof kasta oo kugu qasba inaad gasho khasnadda inuu ka soo galo midka dhabta ah tan iyo intii aad qaadatay vault been abuur ah, taas oo ah ta aad gali lahayd si aad u marin habaabiso. Habkaani wuxuu noqon karaa mid aad u faa'iido badan, shaki la'aan, waa wax aad u xiiso badan.
Xisaabiyaha - Sawirka Sawirka qari sawirada iyo fiidiyowyada
Haddii aad rabto amniga dheeraadka ah iyo asturnaanta taleefankaaga Android, Barnaamijkan "kalkuleytar", oo aan ahayn kalkuleytar laftiisa, wuxuu u shaqeeyaa sidii jirrid si uu u keydiyo oo u qariyo sawirradaada, sawirada iyo fiidiyowyada aad ku dhex leedahay shaashadda si fudud, dhaqso iyo fudud. Waxay sidoo kale u adeegtaa in lagu qariyo noocyada kale ee faylasha.
Si aad u hesho kalkuleytarkan waa inaad gujisaa oo keliya astaanta barnaamijka oo aad gashaa biin, kaas oo noqon doona isla'eg aad horay u qorsheysay, oo guji calaamadda isku midka ah, taas oo noqonaysa «=». Waxa kale oo ay taageertaa isticmaalka faraha sida hab furayay.
Nidaamka sirta ama logarithm ee ay adeegsadaan qalabkan amniga iyo asturnaanta waa AES, kaas oo damaanad qaadaya ilaalinta guud ee dhammaan faylasha, sawirrada, sawirrada iyo fiidyowyada ku qarsoon codsigan xiisaha leh.
Arrin kale oo iyaduna aad u xiiso badan ayaa ah in, haddii aadan rabin dadka kale inay ogaadaan inaad isticmaasho barnaamijkan, waad qarin kartaa astaantiisa. Waxa kale ee xusida mudan ayaa ah inay leedahay shabakad internet oo gaar loo leeyahay oo aan ka tagayn wax raad ah kadib markay dhammeeyaan kal-fadhiyada. Sidoo kale, dhammaystirka, waxaad si fudud u xiri kartaa barnaamijyada. Ugu dambeyntiina, waxay bixisaa waxqabadka foosto been abuur ah.
Xisaabiyaha - qari sawirrada
Sirta Xogta DuckDuckGo
Waxaa jira daalaciyayaal badan oo ku jira Play Store-ka loogu talagalay taleefannada casriga ah, qaar ka caansan kuwa kale, laakiin in yar ayaa lagu gartaa inay bixiyaan ammaan iyo asturnaan adag sida Browser Asturnaanta DuckDuckGo sameeyo.
Browserkani wuxuu dammaanad qaadayaa fadhiyo gaar ah oo aan u oggolaanayn daba-galka cid saddexaad. Waxay sidoo kale mas'uul ka tahay inay u baahan tahay goobo ammaan ah oo la aqoonsan yahay oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo nabadgelyo, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar wanaagsan in shabakadda loo maro si deggan oo aan walwal lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5-ta barnaamij ee qarsoodiga ah ee ugu fiican Android